Somaliland: Guddida Baadhista Xasuuqa Oo Ka Waramay Tiradda Xabaalaha ay Heleen Sannadkan 2014-ka - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Guddida Baadhista Xasuuqa Oo Ka Waramay Tiradda Xabaalaha ay Heleen Sannadkan...
Guddida baadhista xasuuqii loo geystay shacabka reer Somaliland sanadihii sideetamaadkii taliskii Siyaad Barre ka geystay gobolada Somaliland qaar ka mid ah, ayaa soo bandhigay Xabaallo-wadareedyadii ay heleen sanadkan sii dhamaanaya ee 2014.
Shir jaraa’id oo ay shalay xaruntooda magaaladda Hargaysa si wada jir ah ugu qabteen guddoomiyaha, guddoomiye ku xigeenka iyo xunbo ka mid ah guddiga baadhista xasuuqa Somaliland, waxay kaga hadleen hawlaha ay qabteen sanadkan sii dhamaanaya iyo sidoo kale waxyaabaha u qorshaysan sanadka fooda inagu soo haya.
Khadar Axmed Like, Gudoomiyaha guddida baadhista xasuuqa oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in horaantii sanadkan sii dhamaanaya ee 2014 ay heleen saddex Xabaalood oo ay ku jireen 44 qof qalfoofyadoodii, iyadoo ay baadhista qubuurahaasina ka caawinayeen khubaro u dhashay dalka Peru.
Waxaanu yidhi “Sanadkan sii dhamaanaya bilawgiisii waxaanu soo saarnay 3 xabaalood iyadoo ay nagga caawinayeen khubaro Ajaanib ah oo dalka Peru ka socday. saddexdaa Xabaalood oo 44 qof Qalfoofkoodii aanu ka soo saarnay, kuwaas oo ay dhamaystireen xaqiijintoodii sida ay u dhinteen ka dib-na aanu u samaynay Xabaalo-wadareedyo ku yaalla Galbeed Hargeysa, oo aanu ku aasnay anagoo kaashanay wasaaradda Diinta iyo Awqaafta”.
Waxa kale oo uu intaasi ku daray Md. Like, in ay agagaarka qubuuraha Naaso-hablood eek u yaala bariga Hargaysa ka heleen laba Xabaalood, sidoo kale meel u dhaw taliska guud ee xarunta ciidamadda milaterigana ay ka heleen Xabaalo kale, isagoo xusay in sidoo kale deeno ka tirsan Gabiley ay ka heleen qubuuro kale.
“Naaso-hablood sokadeeda waxaan ka helnay laba Xabalood oo Xabaalo-wadareed ah, xarunta milaretiga ee taliska guud Bariga ka xigtana waxaan ka helnay laba Xabalood oo Xabaallo-wadareedyo ah, oo dad badan lagu xasuuqay oo aanu markhaatiyo u hayno. waxaanu sidoo kale tagnay Gabiley oo iyadana ay ku yaalaan laba Xabalood oo waa weyn, oo aanu dhakhtarada Ajanabiga ah ku balan sanay inay yimaadan oo ay baadhaan. hase ahaatee dib ay u dhaceen cuduradan Afrika ka soo cusboonaday darteed oo aanu filanyo horaanta sanadka cusub inay yimadaan”ayuu yidhi Md. Like.
Guddoomiyaha guddida baadhista Xasuuqa waxa kale oo uu sheegay inay dhawaan safar shaqo ku tageen magaaladda Burco si ay u soo xaqiijiyaan xabaalo-wadareedyo u astaysnaa, isagoo tilmaamay inay heleen laba xabalood halka ay mid kalena waayeen.
Dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka guddida baadhista xasuuqa Yuusuf Xaaji Maxamed, oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in sanad ka cusub ay xafiiskooda u qorshaysan tahay inay baadhitaano sameeyaan si ay u xaqiijiyaan xabaalo-wadareedyo ku yaalla gobolka Sanaag degmooyin ka tirsan. sida degmooyin Ceerigabo iyo Ceel-afweyn.
Waxaanu tilmamay in sanad cusub ay qorshaynayaan inay sameeyaan madxaf lagu kaydiyo waxyaabaha xasuuqa muujinaya isla markaana wakhtigan ay ku hawlan yihiin diyaar gareyntiisa.